FBI — Jaaliyaddeena
FBI-du waxay ka hawl gashaa adduun weynaha si ay uga illaaliso wadankeena danbiilayaasha khatarta ah iyo waxaabaha ammaanka halista ku ah. Dadka jooga xafiiska FBI-da Minneapolis, waxay leeyihiin khibrado kala duwan iyo xirfad u suuro galisa inay ka ilaaliyaan adiga iyo qoyskaaga waxyaabahan. Shaqadan ayay qabtaan, iyagoo isla markaasna kuugu adeegaya ilaalinta xuquuqda dastuuriga ah ee aad Mareykanka dhexdiisa ku heshid. In aad na caawiso ayaan u baahanahay si aan shaqadan u qabano.
Haddii aad hayso warar aad is leedahay waxay dan u yihiin hawsha FBI-da ee illaalinta iyo u adeegidda shacabka Mareykanka, waxaad kusoo gudbin kartaa siyaabaha hoos ku qoran. Warka aad soo gudbisid iyo aqoonsigaaga, inta aan awoodno waxaan labadaba u illaalin doonnaa si taxadir leh, maadaama aan aad u qiimeyno xiriirka aan la leenahay jaaliyadda Soomaalida Mareykanka.
Wararka aad soo gudbisid waxaa si gaar ah u fiirin doona FBI Special Agent ama mid ka tirsan shaqaalaha khibradda u leh. Waan akhrisannaa warqadkasta, fax-kasta, ama email-kasta oo lanoo soo gudbiyo. Hadaba, adoo raalli ah la soco, tira badnida waxyaalaha lanoo soo gudbiyo aawadeed, waxaa suurto gal ah in aan midkasta jawaab u celin kari weyno. Waad ku mahadsan tahay tixgelintaada iyo taakuleyntaada.
Khadka E-mail-ka: minneapolis@ic.fbi.gov
FBI 1501 Freeway Boulevard Brooklyn Center, MN 55430
Telefoon: (763) 569-8000
Fakis (Fax): (763) 569-8567
Waad ku mahadsan tahay waqtiga kaa galay soo gudbinta wararkan aad aaminsan tahay in ey caawin doonaan nabad sugidda jaaliyaddeenna.